MYANMAR BLOG READER: Myanmar Blog Reader
Qualcomm's joint venture with Chinese province to shut down: The Information - A joint venture between U.S. smartphone chipmaker Qualcomm Inc and China's Guizhou province will shut down by the end of the month, The Information reporte...
နေတန်ယာဟုကို အစိုးရသစ် အကြီးအကဲအဖြစ် အစ္စရေးသမ္မတ အမည်တင်သွင်း - အစ္စရေးသမ္မတ ရော်ဗင်န် ရီဗလင်က လွှတ်တော်အမတ်အများစုရဲ့ ထောက်ခံမှုရခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဘင်ဂျမင် နေတန်ယာဟုကို အစိုးရသစ် အကြီးအကဲအဖြစ်[...]
လူရွှင်တော်၊ သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင် ရဲ့ အသက် (၅၂) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အလှူ - လူရွှင်တော်၊ သရုပ်ဆောင် ခင်လှိုင် ရဲ့ အသက် (၅၂) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အလှူကို ဧပြီလ (၁၇) ရက်၊ မြန်မာနှစ်ဆန်း (၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ သုဝဏ္ဏ၊ ပေါ်ဆန်းမွှေးလမ်းရှိ ...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းဖို့ မြန်မာ- တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ရဟန်းအမတ် Charles Bo ပန်ကြား - ကချင်ပြည်နယ်က မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကို အပြီးတိုင်ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ မြန်မာ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တရုတ်အစိုးရကို မြန်မာကက်သလစ်ကာဒီနယ် ရဟန်းအမတ် ချားလ်စ်မောင်ဘိုက မေ...
ဇငျလငျး - နှဈသဈကူးပွနျပေါ့ … - *ဇငျလငျး - နှဈသဈကူးပွနျပေါ့ …* *(မိုးမခ) ဧပွီ ၁၈၊ ၂၀၁၉* - နှဈတှေ နှဈတှေ သဈလိုကျ ညဈလိုကျနဲ့ သဈခဲ့ပေါငျးလညျး မြားလှပေါ့၊ ညဈခဲ့ပေါငျးလညျး မြားလှပေါ့...
သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် ပြောတဲ့ ဘာသာ၊ လူမျိုးနဲ့ နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခထောက်ချောက်ထဲ မဝင်မိဖို့ သတိပေးချက်က ဘာကို ရည်ညွှန်းသလဲ - အာရုံပြောင်းလမ်းကြောင်းလွှဲတဲ့ အဖြစ်အပျက်များကိုလည်း သတိပြုကြစေလို မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခထောင်ချောက်ထဲကို မဝင်မိဖို့...
နှစ်ဦးဂီတလက်ဆောင် - နှစ်ဦးဂီတလက်ဆောင် စင်စစ်မန္တလေးသင်္ကြန်ဟူသည်ကား ဂီတပွဲတော်ကြီး တစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့ရိုးရာ မှန်စီရွှေချ၊ ပဉရူပပတ်မထမ်း ဆိုင်းဝိုင်းကြီးများဖြင့် မြန်မာ့ဂီ...
Iran's Parliament Labels US Troops in Mideast as Terrorist - Iran’s lawmakers on Tuesday overwhelmingly approvedabill labeling U.S. forces in the Middle East as terrorist,aday after the U.S. terrorism designation...
ခေါပြင် စိမ့်စိမ့်လေး - ဒီနေ့တော့ ငယ်ငယ်က ဝယ်စားဖြစ်တဲ့ ခေါပြင်မုန့်လေးတွေ စားချင်တာနဲ့ လုပ်ဖြစ်သွားပါတယ် ပထမတစ်ခါ လုပ်တဲ့နည်းက နည်းနည်းလေး ခက်တယ်လို့ ပြောလို...
ပါးချိုင့်..... - သေချာပြုံးလိုက်ရင် သူ့ပါးမှာ ပါးချိုင့်လေးပါတာကို ကျွန်မသတိမထားခဲ့ဖူးဘူး...။ ကော့ပျံနေတတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့ သွားစွယ်ဖွေးဖွေးတွေကိုသာ ငေးမောနေမိလို့ဖြစ်မယ်......
စာဖတ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအကျင့်တွေနဲ့ ဘယ်လိုတွေ ဖတ်တတ်ကြသလဲ - စာတွေ ဘယ်လိုဖတ်နေကြလဲမေးရင် ဒီလိုပဲဖတ်တာပေါ့ ဘယ်လိုများဖတ်ရဦးမှာလဲ ပြောကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အင်း ပြန်ဖြေကြည့်ပါဦးလားလို့ ပြောချင်တယ်။ တကယ်တော့ လူတွေ စာဖတ်ကြတယ်...
3 Real Reasons Behind High Divorce Rate in the United States - Developed countries generally haveahigher divorce rate. For instance, in the United States, the divorce rate is at least 50%. And many couples who aren...
Youk Kha Ma -2 - Watch The post Youk Kha Ma -2 appeared first on Shwe Dream.
Kachin women from Myanmar 'raped until they get pregnant' in China - Women from Kachin minority are allowed to go home only if they leave baby behind, says HRW report Burmese and Chinese authorities are turningablind ey...
Matchmaker Jennifer J. Hayes Challenges you to go deeper - Such requests we make of our clients, as matchmakers, could be difficult at times. No one will conveniently agree to let someone manage their love life an...
Bhutan to allow entry of regional tourists through all border towns | #AsiaNewsNetwork - [image: Taktsang Palphug Monastery, Bhutan] 2019-01-20 Currently, Phuentsholing is the only entry point for regional tourists. However, entry and exit woul...
Announcement of New Website: Rohingya Today (RohingyaToday.Com) - Announcement of New Website: Rohingya Today (RohingyaToday.Com) Dear Readers, From 1st January 2019 onward, the Rohingya News Portal 'Rohingya Blogger' ...
“ငွေကြေးအခက်အခဲ ပြေလည်စေသော အစီအရင်” - ကျမ ရဲ့ ကိုယ်တွေ့အဖြစ် လေး ပါ။ ဟိုး လွန် ခဲ့ တဲ့ ဆယ် …
A Maw Phay
သီပေါမင်း ပါတော်မမူခင် မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ လူနေမှုဘဝ လှုပ်ရှားမှုများကို ဗဟုသုတရစေတဲ့ ရှားပါး ဗွီဒီယို - သီပေါမင်း ပါတော်မမူခင် မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ လူနေမှုဘဝ လှုပ်ရှားမှုများကို ဗဟုသုတရစေတဲ့ ရှားပါး ဗွီဒီယို သီပေါမင်း (၁၈၇၈-၁၈၈၅) သည် ကုန်းဘောင်မင်းဆက်၏ နောက်ဆုံး...
Popular Reef Aquarium LFS in Singapore - Updated Aug-2018 - If you areareef aquarium lover living in Singapore, here isalist of reputable LFS in Singapore. This may not be the complete list however I am here lis...
Me and My Best Friends - YouTube
Messi looms for Liverpool, but Cardiff on Klopp’s mind for now - PORTO (Portugal) — Jurgen Klopp might be steeling himself for some sleepless nights as he tries to work out how to stop Lionel Messi, but for now the Ger...